Filimkii Trump u shiday Kim Jong-Un – Video • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Filimkii Trump u shiday Kim Jong-Un – Video
Filimkii Trump u shiday Kim Jong-Un – Video
June 13, 2018 - By: Khalid Yusuf
Kulankii Taariikhiga ahaa ee shalay dalka Singapore ku dhexmaray hogaamiyayaasha Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa la sheegay in Donald Trump intuu kulankaasi socday filim u shiday Mr.Kim Jong Un si uu ugu dhiiri-geliyo heshiis dhexmara labada dhinac.
Filimkan gaaban oo soconayey 4 daqiiqo ayaa lagu muujinayey in dan weyn ugu jirto labada dhinac inay heshiiyaan, taasina sare u qaadi doonto horumarka iyo waliba ganacsiga dalka Kuuriyada Waqooyi.
Muuqaalankan ayuu Trump doonayey inuu ku saameeyo Hogaamiyaha kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo la sheego inuu jacelyahay filimaanta, Trump ayaa sheegay in markii uu filimkan u shiday wafdiga Kim Jong Un ay si weyn uga heleen, waa siduu hadalka u dhigayee.
Kadib markii muuqaalkan isla shalay lagu faafiyey baraha bulshada ku sheekaysato ee internetka ayey shacabka iyo waliba saxaafada siyaabo kala duwan uga hadleen filimkan oo lagu tilmaamay barobogaando ay sameeyeen Aqalka Cad.
Kulankii shalay ayey labada hogaamiye kasoo saareen heshiis horudhac ah oo ay ku sheegeen balanqaadyo sida in Kuuriyada Waqooyi ay burburiso hubkeeda Nukliyeerka, halka Donald Trump balan qaaday in ay qaadi doonaan cunqabateynta iyo cadaadiska ay saareen dalkaasi markuu fuliyo balanqaadkiisa.
Balse Trump ayaa si lama filaan ah sidoo kale u sheegay in ay joojin doonaan dhoolatuskii Militari oo ay sanad walba wada sameyn jireen ciidamada Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, go’aankan oo kadis ku noqday dowlada Kuuriyada Koonfureed ee xulafada la ah Maraykanka.
Trump ayaa ku sheegay dhoolatuska militari ee sanad walba ka dhaca Koonfurta Kuuriya mid ay ku baxdo dhaqaalo badan oo aan loo baahneyn, Kuuriyada Waqooyi ayaa muddo dheer ka cabaneysay dhoolatuskaasi militari.
Xus loo qabtay dadkii ku dhintay weerarkii Hotel DusitD2, Nairobi
Talibanka Afghanistan oo dilay in ka badan 100 Askari
Israel oo duqeysay Ciidamada Iran ee ku sugan Siiriya – Video
Dowlada CHAD oo Mali looga dilay askar kadib booqashadii Netanyahu
Kooxda ‘Real IRA’ oo lagu eedeeyey weerarkii bambaano ee Waqooyiga Ireland
Madaxweynaha Hirshabelle oo isku Shaandhayn ku Sameeyay Gollihiisa Wasiirada
Md Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomey safiirada Masar iyo Indonesia-Sawiro
Eng Yariisow oo ka qeyb galay buug lagu soo bandhigayay siyaasada barakacayaasha-Sawiro